I-China LET SCOOTers SIMPLIFY UMSEBENZI WAMAHHALA WOKWENZIWA NOKwakha | IsiLenda
I-Mountain Bike-e bike
Isithuthuthu sokumiswa kwebhayisikile
I-City Bike-e bike
Ukuhamba ngebhayisekili elihamba ngezinyawo
Ukuhamba ngebhayisekili le-Bike-e
MASISENZE AMAHORA WOKUSEBENZISA AMAHHALA
Lula amahora wokusebenza
Beka amasondo kubasebenzi futhi wenze lula amahora wokusebenza.
Ngabe umsebenzi wakho une-pedometer ephaketheni lakhe?
Noma ihhovisi lakho lilincane, abasebenzi abaningi bashayela amamayela nsuku zonke.
Besihamba amakhilomitha angaba mahlanu ngehora. Uma isisebenzi sithatha izinyathelo eziyi-8-10,000 ngosuku lomsebenzi, lokho kuyalingana amakhilomitha ayi-6 futhi kuthatha ihora elilodwa nemizuzu eyi-10. Kuba amahora ayi-6 ngesonto elisebenzayo - noma amahora angama-276 ngehora unyaka!
Ungathola nokuthi kwenzekani lapho unyusa umholo wehora ngehora lomsebenzi! Uma unabasebenzi abaningi abachitha isikhathi esiningi kwezokuhamba zangaphakathi, ungafuna ukucabanga ngezinketho ezintsha.
Ama-scooters kagesi e-LENDA ahamba amakhilomitha angama-20 ngehora.Uma abasebenzi bakho besusa is scooter esibonelweni esingenhla esikhundleni sokuhamba, isikhathi sokuhamba sincishiswa ngo-70% ngokomthetho.
Bangakwazi ukuzishayela ngemizuzu engama-20 esikhundleni sokuhamba amakhilomitha ayi-6 ngehora eli-1 nemizuzu eyi-10. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwesonto kweviki kuncishiswa ihora eli-1 nemizuzu engama-40 .Ngekho unyaka owodwa, kungabi ngamahora angama-200 angaguqulwa kusuka esikhathini sokuhamba kuya isikhathi sokusebenza esifanelekile.
Awukho umthetho wemvelo othi abasebenzi bathande ukuzivocavoca emsebenzini, kodwa njengoba ezinye izisebenzi zithanda ukuhamba bese zigxumela ngaphezulu kwabososayensi ayilungile ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke ake sithi uhhafu wesikhathi sokuhamba wangaphakathi usuka kwesinye isondo usiya kwesinye.sisezikhathi ezingama-100 .
Ngaphezu kokushintsha isikhathi ukusuka ezokuhamba zangaphakathi kuya emahoreni okusebenza afanelekayo, ungathola nabasebenzi abajabule ngokwengeziwe. Lokhu ngokwengxenye yingoba kufanele banciphise futhi babe nesikhathi esithe xaxa sokuqedela umsebenzi wabo ngezikhathi zomsebenzi ojwayelekile.Phela ngoba iningi labantu licabanga ukuthi umsulwa pamper, futhi kumnandi ngempela ukudlala kwi-scooter.
Isikhathi sokuthumela: Apr-23-2020
Ama-BICYCLES WOKUKHETHA Agibela KAKHULU. UNGAKWAZI UKUZEZA ...
Isikhungo Sezomnotho saseTianjin Airport
Sishayele Manje: +8615222010177